Ny zavatra tsara indrindra atao, Londres sy ny fomba ahatongavana any | Save A Train
Home > Train Travel UK > Ny zavatra tsara indrindra atao, Londres sy ny fomba ahatongavana any
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 17/04/2020)
Raha ny nitsidika Eoropa malaza indrindra renivohitra, London no isalasalana fa tao an-tampon'ny mpizaha tany rehetra ny Wish List ary misy zavatra maro atao, Londres. Izany dia midika hoe nahazo ela, mahavariana ny tantara; mari-toerana tsara tarehy sy ny zava; ary misy betsaka ny zavatra tokony hatao any. Na ianao-nandeha mora mpizaha tany izay te-hahalala ny an-toerana kolontsaina, na mpisantatra mitady fientanentanana, London manana zavatra miandry anao.
Mazava ho azy, hafa noho ny fahafantarana momba izay tokony hatao ao London, fa zava-dehibe ihany koa vao hahalala ny fitaovana ny Travel. Nahazo misy lamasinina dia iray amin'ireo safidy voajanahary indrindra, indrindra raha mandeha ianao avy amin'ny tanàna lehibe tahaka an'i Paris Eoropa, Amsterdam, na Berlin. Ity Indray Mitopy Maso An'i London hetsika sy ny fiaran-dalamby izay hanampy anao drafitra ny vakansy:
Ny zavatra tiako atao any Londres
Ao an-tanàna ho toy ny lehibe London, narrowing midina ny lisitry ny asa amin'ny safidy vitsivitsy dia efa azo atao. Ianao mihitsy no hahita ny hitan'ny olona, ​​ary hisambotra ny rehetra marina London traikefa nandritra ny fitsidihana iray. Izany no mahatonga dia mampiseho mametraka ny laharam-pahamehana mialoha.
Ho anareo izay mitady zavatra tokony hatao any Londres izay mifandraika amin'ny fiantsenana, tsena hafa no ho hanasongadinana ny fitsidihana. No tadiavinao marina, sakafo an-toerana? Jereo ny Borough Market sy sample ny gastronomic mahafinaritra, na hihinana eo amin'ny iray amin'ireo toeram-pisakafoanana teo akaiky teo. Raha toa ianao bebe kokoa amin'ny toe-po ho an'ny sasany ny trano fivarotana fiantsenana, Liberty dia toerana lehibe. -tsy izany, mandehana mihaza ho an'ny sasany mangatsiatsiaka Antiques amin'ny Portobello Road Market.
Raha nankany Londres manana ny fanabeazana bebe kokoa ny toetra, mitsidika ny sasany amin'ireo toerana mafampana ara-kolontsaina tao an-tanàna. Avy nanatrika ny fanorenana indray ny Shakespeare ny Globe mba hianatra momba ny Tilikambon'i Londres, ianao no be atao. Te koa isika fahazoan-dalana mankany amin'ny zavakanto maoderina mankafy ny Tate Modern ny tany atsimo Bank, ary koa ny mitsidika ny Southbank Centre.
Utrecht tany Londres Lamasinina
Antwerp ho any London Lamasinina
Strasbourg ho any London Lamasinina
Luxembourg ho any London Lamasinina
Mahazo ny London lamasinina avy any Paris, Amsterdam, ary Berlin
Afaka hahatratra London avy Paris, Amsterdam, ary Berlin mora foana amin'ny alalan'ny Eurostar, Intercity sy Thalys fiarandalamby. Ny sasany amin'ireo toerana manomboka hanana fomba voajanahary kokoa ny tonga Londres noho ny hafa. Ohatra, dia afaka hiditra ao ny Eurostar haingam-pandeha mivantana fiaran-dàlamby mankany Londres avy any Paris, ka mitoera ao amin'ny mahery kely roa ora sy sasany.
Rehefa nankany Londres avy any Amsterdam sy Berlin, avy Amsterdam, dia afaka mandray ny Eurostar mivantana na safidy tsara iray hafa Mangataka aloha hahatongavana any Bruxelles alalan'ny Thalys ary avy eo dia hiditra Eurostar any Bruxelles tany Londres. The dia maka adiny efatra, ary toy izany no fomba haingana indrindra hahatratra London avy any Amsterdam lamasinina.
Mahazo ny renivohitra avy any UK Berlin lamasinina dia mitaky fiovana roa. Ny tapany farany ny dia dia mitovy toy ny avy any Amsterdam, ary avy eo dia niditra ny Eurostar. Na izany aza, safidy iray hafa dia ny hampiofanana Travel avy hatrany Berlin ho Cologne, izay te hiditra ao ny fiaran-dalamby ho any Brussels. ny ny haingana indrindra fiaran-dalamby niala tao Berlin ho any London sy maka kely tsy dia 10 ora ary avy eo dia afaka manao ny zavatra rehetra nianaranao momba ny zavatra hatao any Londres.
Vonona ny Get ny London?
Raha efa nanapa-kevitra izay ny toerana tena zavatra atao any Londres dia ho, ianao ihany no mila manao ilay dia! Nahazo teo lamasinina mora, ka mandehana sy ny Bokin'i ny seza ho vakansy mahafinaritra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-things-to-do-london/ - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ny fialantsasatra yoga ambony any Eropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe, Yoga in Europe
Eoropa Firenena amin'ny Best Weather
Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Portugal, Fiaran-dalamby Spain, Travel Europe